Ukuphakama kukaBrock Lesnar, ubunzima kunye nobukhulu bakhe buchaphazela njani indlela yakhe yokulwa - Wwe
Ukuphakama kukaBrock Lesnar, ubunzima kunye nobukhulu bakhe buchaphazela njani indlela yakhe yokulwa
U-Brock Lesnar uhlala ethathwa njengoyena mdlali ubalaseleyo kumlo ophumeleleyo ophumelele iCandelo le-NCAA I I-Heavyweight Championship, i-WWE World Championship kunye ne-UFC Heavyweight kunye ne-IWGP ye-Heavyweight Championship kwikhosi yeminyaka elishumi elinesithandathu kuphela. Ukuphakama kukaBrock Lesnar zi-6 ft. Kunye nee-intshi ezi-3 kunye nemilinganiselo yesilwanyana malunga ne-286 lbs okanye i-130 kg kwaye inokucinezela ibhentshi ngaphezulu kwe-600 lbs kunye ne-squat 1000 lbs.
Ubungakanani kunye namandla akhe enza umahluko omkhulu kwindandatho nakwi-octagon emvumela ukuba aphakamise abachasi bakhe ngaphandle komzamo omkhulu kunye nokubanyusa ngelixa besemhlabeni ngaphambi kokwenza uphawu lwentengiso yakhe ngeengqiniba kunye namanqindi.
ubhala njani ileta yothando
Ufunde kwakhona: Iitatto zikaBrock Lesnar- zibonisa ntoni?
USodolophu weSixeko saseSuplex
U-Brock Lesnar wenza umsayino wakhe u-F5 kulawulo lwamaRoma
Akusiyo imfihlo ukuba uLesnar uthanda ukuphakamisa abachasi bakhe nokuba wenza enye yeendlela ezininzi zokuziphatha kakuhle kwiminyaka edlulileyo okanye ukusayina kwakhe, i-F5. Isuperstar iyathanda ukuba abachasi bayo bathunyelwe kwiSuplex City, kuphela ukuba bamkelwe ziintlungu ezibuhlungu zokuphoswa ejikeleze iringi njenge-ragdoll.
U-Brock Lesnar unokuthatha kwaye aphose kuyo nayiphi na i-Superstar eyaziwayo nokuba yi-Big Show okanye i-Great Khali ngaphandle komzamo omkhulu kwaye oku kumenza ahluke kuninzi lwabanye kuluhlu lwe-WWE ngendlela enkulu.
Inkosi yomhlaba kunye neponti
U-Brock Lesnar uthanda ukulawula abachasi bakhe emva kokubasa emhlabeni ngokwenza intaba ngaphambi kokuba abaqubule nge-avalanche ye-forearm kunye ne-elbow strike kunye neepunch ezinzima. Oku kungabeka nawuphi na umlo engozini njengokufumana irhamncwa kuwe likwindawo enje kunzima kakhulu ngenxa yobukhulu bayo.
Isuperstar ikwanamanqindi amakhulu kunalawo aphakathi, adityaniswe namandla atyumza amathambo eepunch zakhe, anokubeka nawuphi na umlo onamava kwihlabathi lentlungu.
Umzekelo wakutshanje woku ungabonwa nge-Agasti ka-2016 ye-SummerSlam yokujonga apho wenza khona utyikityo lwe-MMA isitayile somhlaba kunye nokuhlaselwa kweponti kuRandy Orton, evusa ibunzi lakhe evulekileyo ukuphumelela umdlalo nge-TKO.
Irhamncwa lisebenzisa malunga ne-7,000 yeekhalori ngosuku
U-Brock Lesnar ulandela oko kubizwa ngokuba kukutya kwe-caveman, okt ukutya okuneproteni ephezulu yenyama kuphela, kudla malunga ne-7,000 yeekhalori ngosuku olunye! U-Brock ebelandela ukutya kwakhe ukusukela esemncinci kwaye nangona oku kumncedile ekwakheni ubunzima bemisipha kunye nokugcina amandla kunye nesantya, oku kutya ekugqibeleni kuye kwabangela imicimbi yezempilo enzulu ekhokelela kwi-diverticulitis esongela ubomi.
Ukungabikho ngokupheleleyo kwefayibha ekutyeni kwakhe kwabangela ukuba iindonga zesisu zikaLesnar zichithakale zishiya imingxunya kwikholoni yakhe eyavumela ukuba into enqabileyo ivuze esiswini sakhe. Oku kuye kwabangela iintlungu ezininzi kwaye akayikhathalelanga oku phantse unyaka, waphula amajoni akhe omzimba okukhokelela ekubeni abe sesichengeni kwizifo ezinjenge-mononucleosis awayehlupheka kuyo ngexesha lomsebenzi wakhe we-UFC.
U-Brock kuye kwafuneka ukuba enze utyando kabini kwisithuba seminyaka emibini ukuze avale imingxunya kwiindonga zesisu sakhe kwaye abenesiqwenga esikhulu sekholoni yakhe esuswe kuba yayingaphaya kokulungiswa. Ukususela ngoko, iindlela zokutya zikaLesnar ziye zaphucuka njengoko ngoku esongeza ukutya kwakhe kwenyama kunye nemifuno engaphezulu yamagqabi.
U-Brock usebenzisa i-protein ye-creatine kunye ne-whey emva kokuzilolonga ukuze ancede ekugcineni umzimba wakhe wonke kwaye asele ubuncinci be-gallon enye yamanzi e-electrolyte yonke imihla.
U-Brock Lesnar unokubeka ibhentshi kwi-655 lbs emenza ukuba abe yenye yeembaleki ezinamandla emhlabeni
Owayesakuba yi-WWE Superstar Kurt Angle wayeqhele ukuqeqesha u-Brock xa babekho bobabini kwi-WWE kwaye waxelwa kudliwanondlebe ukuba ubone i-Beast bench press ngaphezulu kwe-600 lbs kunye ne-squat ngaphezulu kwe-1000 lbs.
kuvakala njani ukungabinabahlobo
U-Brock Lesnar okwangoku uphethe i-bench press yakhe ubuninzi be-655 lbs. Ukubeka oku ngokwembono, uMark Henry, ohlala ebizwa njengeyona ndoda inamandla emhlabeni yiWWE, iibhentshi ezingama-585 lbs ngelixa i-WWE Superstar yeGreat Khali kwi-7ft 1in, ibambe i-600 lbs.
I-WWE Superstar yokuqala yokuphumelela umdlalo nguKnockout
ULesnar wayengowokuqala weWWE Superstar ukuphumelela umdlalo nguKnockout
U-Brock Lesnar, ngexesha le-Backlash 2002, wabeka ibar entsha yeWWE xa, emva kokuqhushumisa amandla kumchasi wakhe uJeff Hardy, waphumelela umdlalo ngokunkqonkqoza okokuqala kwimbali yokulwa.
Bambalwa kakhulu abantu ukusukela ngoko abaphumeleleyo ukuphumelela umdlalo ngokunkqonkqoza kumsesane weWWE kodwa uBrock uyaqhubeka nokwenza njalo njengoko sibonile kumdlalo wakhe noRandy Orton ngeli xesha leSummerSlam.
Nanku ukuthelekiswa kokuphakama kukaBrock Lesnar kunye noontanga bakhe
Ukuphakama kweBrock Lesnar-1.88m
Ukuphakama kweBill Goldberg-1.93m
Ukuphakama kukaMark Hunt-1.78m
Kwiindaba zeWWE zamva nje, abaphangi kunye namahemuhemu batyelele icandelo lethu le-Sportskeeda WWE.
Izinto ezipholileyo ekufuneka uzenzile xa ukruqukile
ixesha eliqhelekileyo lokuthandana
uxanduva njani ebomini
ngubani u-ronda ovusa umlo ngokulandelayo
wwe chyna unobangela wokufa